Maitiro Ekuisa kana Kuumba iyo LLC mune Chero Nyika
Maitiro ekubatanidza ari nyore, zvisinei nekuti unozviita sei, kuburikidza negweta, repamhepo gwaro kumisikidza sevhisi kana kuzviitira iwe pachako; pane zvakajairika maitiro ekutevera, hezvino izvo zvaunoda kuti urambe uchifunga pamusoro pekuti ungapinza sei bhizinesi rako:
Sarudza zita rekambani uye chitupa
Zita kuwanikwa kuwanikwa
Gadzirira uye faira zvinyorwa zvekubatanidzwa nehofisi yenyika
Bhadhara mari yekufaira nyika
Aya ndiwo maitiro chaiwo ekuti "upinze", izvo zvisiri kungoisa zvinyorwa zvekubatanidza kana kuumbwa nehofisi yenyika, iri yega, iri nyore. Kune zvinhu zvekutumira zvekuposita izvo zvichave chikamu cheyese maitiro, akadai se:
Kusarudza chinzvimbo chemutero neiyo IRS
Kuwana nhamba yekuzivisa mushandirwi
Kuvhura account ye bank
Kutanga bhuku rekodhi rekambani
Chiratidzo kana kugadzirira patent
Domain zita kunyoreswa
Bhizimusi rega rega richava danho rakatosiyana uye zvinoenderana nerudzi rwechinhu chakaumbwa, kumakambani mashoma ekudyidzana nemakambani emitoro, kugadzira chibvumirano chekushanda, zvibvumirano zvekudyidzana uye magwaro epamutemo zvichave chinhu chakakosha kuchikamu chekubatanidza.
Kusarudza zita rekambaniSarudzo yezita inofanirwa kuenderana nezvimwe zvishoma zvinodiwa. Anoreva mazwi asina kubvumidzwa uye chiratidzo chekambani. Chitupa Chemubatanidzwa chikamu chezita rebazi, senge "Inopindirwa" "Corporation" "Kambani", "LLC", "Ltd", "Yakatemerwa" kana chidimbu chinogamuchirwa cheizvi. Zita rako rakasarudzwa harigone kunyatsoita kana kunyanyisa kufanana kune bhizinesi ratovepo mukati medunhu rimwe chete. Iro zita raunosarudzira kambani yako harifanire kunge riri rekuedza kushandisa zita kuzivikanwa kweimwe bhizinesi rakanyoreswa. Kuve uine zita rako rekushambadzira kunokutendera iwe kuti urishandise mune ese makumi mashanu matunhu. Zvimwe zvekufungisisa zvekutora ndezvekuti:
Iro zita remakambani harigone kureva kubatana nesangano rechitendero, rerubatsiro, veteran, kana nyanzvi pasina tayi iyi ichisimbiswa zviri pamutemo mukunyora.
Iro zita rekambani harigone kutsausa, zvichireva kuti haugone kuva nemutsara, "bhangi" muzita rako rekambani kana kambani isina kugutsa zvinodiwa nenyika zvekubatanidza sebhangi.
Rimwe kana maviri mamwe mazita anofanira kusarudzwa kuti ape imwe sarudzo kana sarudzo yako yekutanga muzita ikatorwa.
Tarisa kuwanikwa kwesarudzo yezitaZita raunosarudzira bhizinesi rako rinofanira kuongororwa nenyika yauri kusanganisa usati waisa zvinyorwa zvako zvekubatanidzwa. Ino inzvimbo inzvimbo yehunyanzvi sevhisi inogona kukuchengetera nguva nekusimbisa hukama hwavo nenyika. Kana iwe ukanyora chero magwaro ane zita rakatotorwa, iyo kufaira kunorambwa. Kuti utarise kuwanikwa, unogona kushandisa cheki zita nefoni, kana iripo, kana kutarisa webhusaiti yako yenyika uye kuita yeruzhinji marekodhi kutsvaga online
Shandisa zita cheki kuburikidza nefoni kana ichiwanikwa mudunhu iwe rauri kusanganisa
Tarisa uone kuwanikwa kwezita usati waisa zvinyorwa zvekubatanidzwa
Shandisa nyanzvi yekufaira sevhisi
Faira magwaro anodiwaIwo magwaro akagadzirirwa aunofanirwa kuisa kuitira kuti ubatanidze anogona kuzivikanwa se "zvinyorwa zvekubatanidzwa" "zvinyorwa zvesangano" "charter" kana "gwaro rekubatanidzwa" zvinoenderana nedunhu rako. Iwo zvinyorwa zvinoiswa kumunyori wako wehofisi yehurumende, kana rimwe bhizinesi rinodzora agency. Dzimwe nyika dzinoda kuti zvinyorwa zvekubatanidzwa zvinyorwe neimwe fomu yeruzivo.
Faira zvinyorwa zvako zvakapedzwa zvekubatanidzwa
Nyora mafomu kuti akwanise kunyorwa zvakajeka
Sarudza pamusoro pemakambani akanyoreswa mumiririri - unofanirwa kusarudza munhu kuti agamuchire magwaro epamutemo kukero yepamutemo akamiririra kambani.
Kuwedzera Masangano EhurongwaKutevera kuiswa kwezvinyorwa zvekubatanidzwa, iwe unofanirwa kurongedza mashoma mashoma akakosha kuti upedze musangano wesangano rako. Zvinyorwa zvekubatanidzwa zvakamisikidzwa nehurumende zvinofanirwa kugamuchirwa zviri pamutemo nekambani yako, mitemo inoda kutorwa (yemakambani), zvibvumirano zvekushanda kana kudyidzana (kune mashoma makambani ekudyidzana nemakambani emitoro), mahofisi akasarudzwa, stock yakapihwa, uye chisimbiso chekambani chakatenderwa . Kazhinji, izvi zviito zvinoitika pamusangano wesangano. Pamusangano uyu madhairekita akapihwa, maofficial, uye vagovani vanoita zvisarudzo pazvinhu zvesangano Sarudzo dzinobva dzanyorwa se “maminitsi” emusangano.
Tora zvinyorwa zvekubatanidzwa
Tora mitemo kana zvibvumirano
Sarudza mahofisi akadai semutungamiriri wenyika, mutevedzeri wemutungamiri wenyika, munyori, uye mubati wehomwe
Bvumidza chisimbiso chekambani
Gadzirira Corporate RecordSangano rinodikanwa kuti rirambe rakanyatsorondedzerwa zvinyorwa zvezviitiko zvinotanga nebhizinesi. Iwe unozozvitenda wega nekuchengeta iwo ane hunyanzvi marekodhi kana zvisingafungidzike zvakamboitika, uye iwe une IRS iri kuda kutarisa kune ako emakambani marekodhi. Mabhangi anodawo kuona ako marekodhi marekodhi kuitira kuchengetedza mari yekambani. Ichi chinyorwa chekuchengetedza chakakosha sezvo chiri humbowo hwekuti kambani yako inochengetedzwa zvakanaka uye kurongeka.
Kutanga uye chengetedza zvakadzama zvinyorwa zvemakambani
Zvinyorwa zvakadzama zvinoratidza kuti kambani yakarongeka uye iri kushanda nemazvo
Iye zvino zvaunoziva nezve iyo yekuisa mafirita uye post yekubatanidza maitiro, iwe unofanirwa kusarudza kuti ndiani wauchazopa iro basa. Zviripachena iwe unogona kutora iyo sarudzo yekuita yese legwork iwe pachako pane imwe mari. Magweta anogona kunge ari imwe sarudzo pamutengo wakakwirira kwazvo.
Kusarudza gwaro repamutemo kugadzirira uye yekumisikidza agency, kazhinji, ndiyo inokurumidza uye yakapusa nzira yekuisa. Iwo anozivikanwa ehunyanzvi mamiririri kunyange ane sarudzo dzavanogona kuwana kwavari senge yemagetsi kusefa iyo inogona kukurumidza zvikuru iyo yekubatanidza maitiro.
Makambani Akaunganidzwa mafaira mazana emagwaro vhiki, pasirese uye ndiye akapihwa muyero wepamusoro mukugutsikana kwevatengi.